Budata Fraps maka Windows
Free Budata maka Windows (2.22 MB)
Fraps bụ a ihuenyo ndekọ omume na-enye ohere ọrụ ka ịdekọ gameplay videos, na-screenshots na benchmark ha kọmputa.
Fraps, otu nke mbụ software na-abịa nuche mgbe ọ na-abịa agbapụ egwuregwu videos, bụ a ihuenyo video ndekọ software na-anọchi na ya ala nke iji na arụmọrụ. Netiti mmemme ndekọ ihuenyo, sọftụwia ole na ole nwere ikike ịse vidiyo vidiyo. Mmemme ga-enwerịrị nkwado DirectX na OpenGL iji chekwaa onyonyo na ihuenyo dị ka vidiyo na egwuregwu. Site na njirimara ndị a, Fraps nwere ike ịdekọ vidiyo egwuregwu gị na ihuenyo zuru oke. Fraps, nke nwekwara multi-core processor support, nwere ike iwelata arụmọrụ arụmọrụ na usoro ndekọ vidiyo ma ọ bụrụ na ị nwere ọtụtụ isi ihe nhazi.
Fraps na-enye ọtụtụ nhọrọ maka ịdekọ vidiyo. Nwere ike ịtọ file size nke videos ị ga-dee na Fraps a kacha nke 4 GB. Na mgbakwunye, ị nwere ike ikpebi ole Fps vidiyo ga-edekọ. Ihe omume ahụ na-enye gị ohere ịdekọ vidiyo na kachasị nke 120 Fps.
Na Fraps, ị nwere ike iwepụta nseta ihuenyo na egwuregwu yana wepụ screenshots na desktọọpụ gị. Ọ bụrụ na-ịchọrọ, ịnwere ike hazie mmemme ahụ ka iwere screenshots na etiti oge ka ị kọwapụta nke ọzọ. Enwere ike ịgbanwe igodo ụzọ mkpirisi ị ga-eji maka ọrụ a na igodo ụzọ mkpirisi ndị ọzọ dịka mmasị gị si dị.
Site na njirimara benchmark nke Fraps, ị nwere ike ịlele arụmọrụ kọmputa gị na egwuregwu. Site na igbanye na fps counter nke usoro ihe omume, ị pụrụ ịgbaso gị fps uru na ezigbo oge na ihuenyo na egwuregwu.
Nha faịlụ: 2.22 MB
Krisp bụ mmemme ịkagbu mkpọtụ nke ndị ọrụ Windows PC nwere ike ibudata ma jiri nefu. Ọ bụ nnukwu...
Fraps bụ a ihuenyo ndekọ omume na-enye ohere ọrụ ka ịdekọ gameplay videos, na-screenshots na...
Budata Bandicam Bandicam bụ onye na -edekọ ihuenyo efu maka Windows. Karịsịa, ọ bụ mmemme ndekọ...
Niji nde 15 na -arụ ọrụ kwa ụbọchị, Shazam bụ ụzọ kachasị ọsọ na kachasị mfe iji chọpụta egwu...
YouTube Downloader Ntụgharị bụ a free ngwá ọrụ na ị nwere ike iji ibudata vidiyo si na YouTube na...
Camtasia Studio bụ otu nime ntanetị kacha mma vidiyo na mmemme vidiyo. Nwere ike ibudata nsụgharị...
Filmora Video Editor bụ a bara uru video edezi omume na-enyere ndị ọrụ bee videos, jikota videos,...
Ọ bụ ezie na Jihosoft 4K Video Downloader na-apụta dị ka onye nbudata vidiyo YouTube, ọ na-akwado...
iFun Screen edekọ bụ ihe dị mfe iji na free ihuenyo ndekọ omume maka Windows PC ọrụ. Ihe ndekọ...
Apple Music Ihe Ntụgharị bụ mmemme nke nwere ike ịgbasa njikwa gị na faili egwu. Nwere ike ịgbanwe...
Gihosoft TubeGet bụ nbudata vidiyo vidiyo YouTube. Ọ bụrụ na ịchọrọ mmemme iji budata vidiyo...
Apowersoft Desktop Screen Recorder bụ ihe dị mfe iji arụ ọrụ desktọọpụ nke ị nwere ike iji ma ọ bụ...
WavePad Sound Editor bụ ngwa ndezi na ndekọ ndekọ nke onye ọrụ kọmputa ọ bụla nwere ike iji. Ọ bụ...
GOM Encoder bụ ihe dị mfe iji na ngwa ngwa vidiyo ntụgharị maka ndị ọrụ Windows. Ihe ntụgharị...
DaVinci Resolve na-arịọ ndị ọrụ na-achọ usoro mmemme ọkachamara nefu maka edezi vidiyo. Blackmagic...
Virtual DJ bụ usoro ngwakọta mp3. Ga-enwe mmetụta dịka ezigbo DJ maka mmemme a magburu onwe ya nke...
Kpochapu mbadamba vidiyo, kpochapụ akụkụ ndị a na-achọghị na jikota mkpachị notu Pịa. Nke a video...
Corel VideoStudio bụ mmemme ndezi vidiyo na -abịa na nhọrọ ọkụ DVD, ntụgharị dị iche iche, mmetụta,...
Audacity bụ otu nime ihe ịga nke ọma ihe atụ nke ụdị ya, ọ bụkwa ọtụtụ edezi ọdịyo edezi yana...
EaseUS, nke anyị maara maka mmemme ya nke ọma ọ mepụtara ruo ugbu a, amalitela ngwa ọhụụ. EaseUS...
Mara: A kpochapụrụ mmemme a nihi nchọpụta nke ngwanrọ ọjọọ. You nwere ike ịchọgharịrị ụdị ndị...